”Haddii uu APP-kani telefoonkaaga ku jiro haddaba iska tir waa halis amaane!” | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Haddii uu APP-kani telefoonkaaga ku jiro haddaba iska tir waa halis amaane!”
”Haddii uu APP-kani telefoonkaaga ku jiro haddaba iska tir waa halis amaane!”
(Hadalsame) 28 Abriil 2020 – Maamulka Abuu Dabeey ugu qaybsan arrimaha Dhijitaalka ah (ADA) ayaa dadka haysta iPhone iyo iPad u sheegay inay iska diraan Mail App ku jira aaladohooda.
“Digniin. Iska jir app-ka Mail. Iska tir oo adeegso apps kale inta halistan amaan ee dhanka xogta ah meesha laga saarayo.” ayay soo dhigeen Twitter-ka.
Waxaa la sheegay in app-kani uu burcadda internet-ka u sahlo inay u dhacaan farriimaha kusoo dhaca Mail-ka, marka ay soo diraan farriimo beleeysan, waxaana xitaa ka digtey Hay’adda Sharciyaynta Isgaarsiinta Imaaraadka (TRA) oo muuqaal soo bandhigtay.
Afhayeen u hadlay Apple oo u warramay Gulf News, ayaa yiri: “Apple waxay daacad u qaadanaysaa halisyadan amaan waana baarnay anagoo ka duulayna xogta nala siiyey, balse arrintani halis wayn ma xambaarsana.”
Wuxuu qoray inay jiraan 3 arrimood oo dib u eegis lagu samayn doono oo Mail-ka khuseeya, balse aanu awood u lahayn in la jabsado xogta aaladda.
Weli lama oga inay halistani ku egtahay Imaaraadka iyo in kale.
ظهرت ثغرة في تطبيق البريد Mail لأجهزة آيفون وآيباد
اتبعوا الخطوات التالية لتفاديها:#هيئة_تنظيم_الاتصالات #aeCERT#mail #ios pic.twitter.com/moIW3ijZ74
— هيئة تنظيم الاتصالات (@TheUAETRA) April 26, 2020
Be careful of the new announced high risk vulnerabilities in Mail application used in iPhone and iPad which poses a risk on information’s sensitivity.#StaySafe pic.twitter.com/OK3ps0zXNA
— abudhabidigital (@AbuDhabiDigital) April 25, 2020
Previous articleDAAWO: ”Awal waxaan qodi jirney 8 god haddana 40 god maalintii!” – Muqdisho oo si ba’an u le’anaysa & khalad kale oo ka dhaca qubuuraha!
Next articleMaraykanka oo Somalia ugu sheekaynaya inuu ka caawinayo Covid-19 caalamkiina ka baryaya wax uu lafahiisa iskaga difaaco (Turkiga oo u duuliyey kaalmadii ugu badnayd)
(Dhuusamareeb) 28 Maajo 2020 - MW Maamulka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye, ayaa bilaabay mubaadaro ku saabsan in la daadejiyo maamulka oo la gaarsiiyo min...